पेट दुखेर १३ वर्षकी किशोरीलाई क्लीनिकमा लगियो त्यसपछि…. « Gaunbeshi
पेट दुखेर १३ वर्षकी किशोरीलाई क्लीनिकमा लगियो त्यसपछि….
घरमा कोही नभएको मौका पारी उनले गरेको गल्ती कसैले थाहा पाएका थिएनन् । तर गर्भ बस्न पुग्दा १३ वर्षकी किशोरीले छोरी जन्माएकी छन्। गत वैशाख २७ गते बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका९६ बस्ने ४१ वर्षीय मनिराम थारुले यस्तो काम गरेका थिए ।
किशोरीको एक्कासी पेट दुखेपछि क्लिनिकमा उपचार गराउने क्रममा भिडिओ एक्सरे गराउँदा गर्भ रहेको खुलेको थियो। उनले आइतवारै छोरीलाई जन्म दिएकी छन्।